Iiraan oo uga mahadcelisay Mareykanka Badbaadada Badmaaxiintii Reer Iiraan – SBC
Iiraan oo uga mahadcelisay Mareykanka Badbaadada Badmaaxiintii Reer Iiraan
Dowlada iiraan ayaa markii ugu horeysay u mahadcelisay ciidamada Mareykanka ee fuliyay howlgalki lagu soo badbaadiyay badmaaxiin dalkeeda u dhashay oo ay afduub u haysteen Burcad badeed Soomaali ah.
Afhayeen u hadlay wasaarada Arimaha Dibada ee wadanka iiraan oo lagu magacaabo Ramin Mehman Ayaa u sheegay Telefishanka Al Calam in dowlada iiraan ay soo dhaweyneyso howlgalka dhinaca bini aadanimada ee ay ciidamada mareykanka ku badbaadiyeen badmaaxiintooda.
Ciidamada Mareykanka ee jooga Xeebaha carbeed ayaa ka fujiyay burcad badeed Soomaali ah doonida reer iiraan oo muddo 40 cisho gacana ugu jirtay kooxaha Qafaalatada ah taasi oo howlgal xoogan lagu soo furtay.
Howlgalka Mareykanka uu ku soo badbaadiyay badmaaxiinta Iiraan ee 13ka qof ah ayaa noqonaya dhacdaddi ugu horeysay ee labada dowladooda dhexmrata iyadoo xisada labada dowladood ay tahay mid cirka ku shareeran.
Weerarada lagula dagaalamayo burcad badeeda Soomaalida ayaa noqday kuwo si xowli ah ku biloowday sannadkan kuwaasi oo ay hor boodayaan dowladaha ay ciidamada ka joogaan xeebaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo baacsi iyo ugaarsi xoogan ku haya jiri badeeda soomaalida.
DOONTAN MARKII HORE WAXAA LAKEENAY XEEBTA GOBLKA BARI .GAAR AHAAN AAGA XAAFUUN,WAXAANA LAGU DILAY DAD IRAN AH O AHA 3 NIN.KA DIB AYEE BADA LA AADEEN . BURCADU AAD AYEE UGU BADAN THY AAG XEEBEEDKA PUNTLAND